Ulwandle engumKrethe: izithombe, incazelo. Amazinga amanzi, usawoti
EngumKrethe ulwandle: izithombe, incazelo. Amazinga amanzi, usawoti
Isiqhingi esikhulu kunazo zonke futhi efudumele ngesiGreki saseKrethe ubizwa wageza ngasoLwandle ezintathu Mediterranean: ogwini olusenyakatho - eKrethe, eningizimu - waseLibya (ehlukanisa eGreece Afrika) Western - Ionian. Nokho, izakhamuzi zendawo ngokuvamile zisebenzisa amagama abo lezi ezilwandle, okuyinto isiyonke kukhona engaphezu kweyishumi ziqhubeka.
Kulesi sihloko, eduze ukubheka omunye esikarisako, ukudalwa Nature namachibi. Lokhu Sea engumKrethe, ngokuvamile ebizwa nangokuthi i-Aegean. Kodwa okokuqala ukunikezela umbono izilwandle ezinhle kakhulu futhi eziningi zokuzivocavoca eGrisi.
Izivakashi uhamba noma eholidini eGreece, okokuqala ukhethe yokungcebeleka non-ethize, okungukuthi kolwandle. Futhi kulokhu, izivakashi babe nethuba elikhulu yokuzikhethela, njengoba Greece lizungezwe eziningi olwandle.
Iningi lala makhadi kuphela ngenhla 3 Sea. Uma ogwini, izivakashi ungathola ukuthi ngabe Sea engumKrethe noma zaseBalearic noma waseLibya. Swimming pool uLwandle iMedithera kuhlanganisa lokhu okulandelayo:
Aegean (engumKrethe Sea);
Umbuso wasenyakatho ingxenye Greece ithé wageza kwakunenqaba yabaseThrace Sea futhi endaweni ningizimu-ntshonalanga Aegean Sea - a Sea Myrtoan.
Kwathi eseholidini khona lapha, ungafunda kabanzi mayelana division zamanje wezilwandle ezizungezile Emaphethelweni edolobha kwelinye lamazwe eminingi yasendulo futhi emangalisayo emhlabeni, edonsa kuye ngokwakhe abahambi abavela emhlabeni jikelele ngoba yimvelo emangalisayo.
Ulwandle emhlabeni esiqhingini saseKrethe
ulwandle engumKrethe evame ukubizwa ngokuthi i-Aegean. Abaningi bengazi phikisana amagama, engazi ukuthi kokubili zilungile. A incazelo enemininingwane lokhu kwesigubhu zemvelo emangalisayo uzonikezwa ngezansi.
Sea waseLibya ehlukanisa isiqhingi sisuka Libya. Greece Coast umugqa kusukela kule steeper ulwandle namawa simboziwe. Ogwini akuzona ethandwa kakhulu. Kodwa ethulile ngaphandle engumKrethe enyakatho ehlobo olwandle.
Ionian Sea ugeza esiqhingini ngasentshonalanga, idume, embaleni yayo enhle ngokumangalisayo nokushintsha kobuso amanzi ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku. Ngokwesibonelo, ichibi Balos ungachazwa ukuthi amanzi olwandle akhanyayo lapha ngaphezu imibala 15-th. Ulwandle kule endaweni efudumele futhi ayijulile, okukhulu kangaka imindeni nezingane.
AboMdabu bakhona bakholelwa ukuthi ohlangothini olungasempumalanga saseKrethe ubizwa wageza ngasemanzini ZaseCarpathos Sea, ogama lakhe livela esiqhingini Karpathos, elise olusempumalanga ye siqhingi. Lenchazelo kancane esetshenziswa futhi alinaso isiqinisekiso esemthethweni.
Ngenxa yenani elikhulu olunesihlabathi esogwini olusenyakatho ye engumKrethe Sea Islands ndawo kahle eyaziwa futhi lidumile izivakashi eziningi ezazivela. Kule ndaba, wathola indondo "Blue Flag" ngoba izimo zendawo lokuphumula, ukuhlangana ezindinganisweni eziphakeme yesimanje.
ethandwa kakhulu engumKrethe Sea. Izibuyekezo wake iholidi baye izivakashi kukuhle kakhulu futhi ngomdlandla. Okuvelayo Unforgettable ukushiya le ndawo kwimemori zonke isihambi. Mhlawumbe isizathu esiyinhloko lena inombolo enkulu amabhishi, isihlabathi camera, entry bushelelezi olwandle nengqalasizinda.
Ngokuvamile, kolwandle itholakala phakathi esiqhingini saseKrethe futhi idlanzana leziqhingi elihle Cyclades (iziqhingi 56 neziqhingana azungeze lesi siqhingi engcwele Delos lasendulo).
Kodwa kuba ugu lwasenyakatho isiqhingi esikhulu kunazo zonke Sea engumKrethe inama-inani elikhulu lamadoda amabhishi uwuhlomele kahle.
Sea ngokwemvelo ezingalindelekile. Phakathi nalo lonke ungakwazi ukubamba nokuzola namagagasi abavuka imimoya Northerly. Phakathi nale nkathi, ukugeza kuba yingozi.
Kunoma ikuphi, kolwandle ihlala omunye ethandwa kakhulu futhi othandekayo njengoba romantics, futhi abathandi ezokuvakasha kakhulu.
Yini ngokuya Hydrography engumKrethe Sea? Amazinga amanzi ngesikhathi kucashile phakathi nobusika ivela 11 kuya ku-15 degrees Celsius, futhi ehlobo 22-27 ° C. Ekujuleni okukhulu kuka-350 metres, izinga lokushisa alushintshi unyaka wonke (cishe 13 ° C).
Engxenyeni esentshonalanga kolwandle ukuba isiqondiso eningizimu empumalanga siqondiswe enyakatho. isivinini salo 0.5-1 amakhilomitha ngehora.
Ngenxa global lokushisa lamanzi ukufudumala kolwandle (ngaphandle akuyona, futhi engumKrethe Sea) amanzi usawoti inyuka kancane kancane. Lokhu eside uLwandle Lukasawoti okuhlushwa okukhulu kuna, isibonelo, Black, futhi imayelana 40.0%. Ngenxa yalesi sizathu, ngemva ngokuluhlaza ageza amanzi eshaweni kudingekile ngamanzi ahlanzekile, ukugwema imiphumela emibi esikhunjeni kanye nolwelwesi lwamafinyila kwamehlo.
Ukuze ulwandle Crete libhekene Semidiurnal amagagasi, ukubaluleka ezingasetshenziswa afinyelela ngamasentimitha angu-60.
ubunjalo Abangalaleli futhi ngandlela-thile ezingalindelekile ikwenze. Isimo kwamanzi ngezikhathi ezingenzeka ngokuzumayo bazijabulele, futhi ngokushesha ukuzola. Ixhumeke nge isinqumo kule ndawo yimimoya phezu ogwini kwedolobha Chania (inhlokodolobha yangaphambili. EKrethe, wafike idolobha lesibili ngobukhulu yaseGrisi), uyakwazi ehlobo ukukhulisa amagagasi kunalokho enkulu phezu waseLibya futhi engumKrethe Sea.
EngumKrethe (Aegean) Sea ngokuphelele ekahle bonke abenzi holidi izinto ezingafani kakhulu. Hhayi lutho esiqhingini saseKrethe Sivamile ukwehlelwa beyofuna ugqozi, abaculi, ababhali, abaculi kanye romance nje.
River Western Bug: incazelo, nemingenela, flora amaqiniso athakazelisayo
Ubisi inyoka - ubuhle emangalisayo
Ingabe ikhona izicabucabu esiyingozi Russia?
Trout (inhlanzi): incazelo. Trout sea, ichibi futhi yawela umfudlana
Likuphi Mordovia esiqiwini? Mordovia State yokulondoloza imvelo kubo. P. G. Smidovicha: umlando, incazelo, isithombe
Ukhululekile futhi ezingokoqobo imibhede embhedeni abadala
Jam wenza kusukela peels orange
Abalingisi kusuka ochungechungeni TV "Isimo ubudala ithenda" netimphawu ochungechungeni
Kuhle-Los Angeles 3. Incazelo, ukubuyekezwa
Indlela aphathwe futhi unomdlavuza wamaphaphu kulesigaba?
Gqoka ngezansi kwedolo - liyisici esidingekayo ikhabethe sowesifazane
Kanjani ukuze ome apula
Indlela ukuhlobisa amakhekhe ekhaya? Qala ngezinkolelo eziyisisekelo
"Expocentre" (eMoscow) isheduli embukisweni
New York ... Izinto musa ukhohlwe
«Lada Vesta": injini zonke ezahlukeneyo kungenzeka